तेह्रथुमबाट चार दलका उम्मेदवार सिफारिस
Mon, Jun 18, 2018 | 11:17:02 NST
09:22 AM ( 8 months ago )
तेह्रथुम, असोज २६ – तेह्रथुमबाट दलहरुले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनावका लागि उम्मेद्वार सिफारिस गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले उम्मेदवारका आकांक्षीको सूचि सिफारिस गरेको जनाएका छन् । नाम सिफारिस भएपछि उम्मेदवारीका लागि नेताहरुको दौडधुप समेत सुरु भएको छ ।
तेह्रथुममा प्रतिनिधि सभामा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट केन्द्रीय सदस्य तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री सीता गुरुङको नाम सर्वसम्मत सिफारिस भएको छ । एमालेले सांसद भवानीप्रसाद खापुङ, पूर्वजिल्ला अध्यक्ष तेजमान कन्दङवा र पूर्वसभासद विष्णुमाया बिकको नाम सिफारिस गरेको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेसन प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेलाई सिफारिस गरेको छ ।
संघीय समाजवादी फोरमले केन्द्रीय महासचिव रणध्वज कन्दङवा, डिबी सुब्बा, तीर्थ अधिकारी र इन्द्र सुब्बाको नाम पठाएको जनाएको छ । समानुपातिक तर्फ अझै धेरै आकांक्षी देखिएका छन् । कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा समानुपातिकतर्फ पूर्वसभासद तुलसी सुब्बा, पूर्वजिल्ला सभापति रामनारायण ढुंगाना, गुरुप्रसाद भटराई र राज्यप्रसाद लिम्बुको नाम सिफारिस गरेको छ ।
एमालेले भीमप्रसाद घिमिरे, अर्जुन ढुंगाना र जमुना सुवेदी तथा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय पोलिटव्युरो सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाई र पूर्वविधायक फुर्वी शेर्पाको नाम पठाएको छ । यस्तै संघीय समाजवादी फोरम नेपालले लोकबहादुर सिंगक, वेदाहाङ कन्दङवा, अस्मिता याख्खा र मानभगत दमाईको नाम पठाएको जनाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य तर्फ क्षेत्र नं. १ मा प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले जिल्ला सभापति गोविन्द ढुंगानाको नाम सर्वसम्मत पठाएको छ भने एमालेले जिल्ला अध्यक्ष लक्ष्मण तिवारी र पूर्व जिविस सभापति किशोरचन्द्र दुलालको नाम सिफारिस गरेको छ । माओवादी केन्द्रले जिल्ला संयोजक इन्द्र इम्सङ र सहसंयोजक गणेशकुमार सेनेको नाम पठाएको छ । संघीय समाजवादी फोरमले सूर्य मादेनको नाम सर्वसम्मत पठाएको छ ।
यस्तै समानुपातिकतर्फ नेपाली कांग्रेसबाट अर्जुन तुम्बाहाम्फे, अर्जुन माबोहाङ, सन्तोष सुब्बा, विपीन सुब्बा, टेकराज तिगेला लगायत दर्जन बढी नेताहरुको नाम सिफारिस भएको छ । एमालेबाट प्रदेश कमिटि सदस्य अनुभूति बम नेपाली, पिताम्बर तिम्सीना, धर्म खुलाल, गणेश सोदेम्बा, तुलसी अधिकारी, रेनुका भटराई र तारा गुरुङको नाम पठाइएको पार्टीले जनाएको छ । यस्तै माओवादी केन्द्रले दिलकुमारी लिम्बु र तेजेन्द्र कुरुम्बाङको नाम पठाएको छ भने संघीय समाजवादी फोरमले सर्वजित निङलेकु, नारायणमान गुरुङ, सेमिमा तुम्बाहाम्फेको नाम पठाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ मा प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले नारायणकुमार ईङनाम, बालकुमार गुरुङ र उत्तमसिंह थाम्देनको नाम सिफारिस गरेको छ । एमालेले बाबुराम थापा, सिर्जना लामा र विश्वराज खापुङ तथा माओवादी केन्द्रले सुशीला कन्दङवा, भीमप्रसाद कन्दङवा र ताराप्रसाद भटराईको नाम पठाएको जनाएका छन् । संघीय समाजवादी फोरमले भने यो क्षेत्रबाट पनि सर्वसम्मत रुपमा सन्तोष लिम्बुलाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।
प्रदेश सभा क्षेत्र नं. २ मा नै समानुपातिकतर्फ कांग्रेसले गणेश घिमिरे, केशव भेटुवाल, भीष्म थपलिया, हरिप्रसाद डाँगी, हेमन्त गुरुङ, केदार गहतराज र जमुना बर्देवा लगायतको नाम सिफारिस गरेको जनाएको छ ।
एमालेले रामचन्द्र थपलिया, नेत्र पन्धाक र लक्ष्मी कार्की तथा माओवादी केन्द्रले तेजमान कन्दङवा, बलिराज ईङनाम र चुडामणी बरालको नाम पठाएको जनाएको छ । संघीय समाजवादी फोरमले कपिलदेव सिंगक, सावित्रा राई, सुविन्द्र थेगुवा र मानध्वज सम्बाहाम्फेको नाम पठाएको छ । जिल्लाबाट राप्रपा, लिम्बुवान, नेकपा माले लगायत दलहरुले पनि उम्मेदवारको नाम तय गरिरहेको जनाएका छन् ।